DHAGEYSO: Xildhibaanno si adag uga soo horjeestay go’aankii guddoomiye Mursal | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Xildhibaanno si adag uga soo horjeestay go’aankii guddoomiye Mursal
DHAGEYSO: Xildhibaanno si adag uga soo horjeestay go’aankii guddoomiye Mursal
Muqdisho (Halqaran.com) – Qaar ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa si adag uga soo horjeestay qoraalkii ka soo baxay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ee 15 mudane looga joojiyay inay ka qeyb galaan 5 Kulan ee soo socda.
Xildhibaan Cabdirashiid Xiddig iyo Xildhibaaan Sadiiq Xersi warfaa oo ka mid ah Xildhibaannadaasi ayaa waxaa ay sheegeen in Go’aanka uu qaatay guddoomiyaha Golaha Shacabka Mursal uu yahay mid sharci darro ah, isla markaana aysan u hoggaansami doonin.
Xildhibaan Xiddig oo wareysi siiyay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay inaysan jirin wax laga mamnuucay, laakin ay arkeen warqadda ka soo baxayday guddoomihii hore ee baarlamaanka.
Sidoo kale, waxa ay sheegeen in ay xasaanad leeyihiin, islamarkaana aysan jirin cid ka hor-istaagi karta inay kulamada Golaha Shacabka ka qeyb galaan.
“Warqadda waan aragnay, laakin ma ahan warqad macna sameeynayso oo naga joojinayso kala fadhiyada, sida caadiga ahna baarlamaanka iyo guddoonka hadda jooga ma jiraan fadhiyo, hawl iyo shuruuc ay hadda qabaan karaan.” Ayuu yiri Xildhibaan Cabdirashiid Xiddig.
Halka hoose ka dhageyso Wareysiga Xildhibaan Cabdirashiid Xiddig: